Mark Gurman dia nilaza fa tsy hisy hetsika Apple amin'ny Novambra | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 23/10/2021 18:00 | About us
ny zava-nitranga paoma foana izy ireo ary ho zavatra hankafizanao irery na miaraka amin'ny namana, nahemotra mihitsy aza. Ireo vokatra sy fanavaozana vaovao an'ny Big Apple dia aseho voajanahary sy miaraka amina horonantsary karakara tsara mba hanaovana fampisehoana izay manintona ny saina. Tamin'ny taon-dasa dia nanambara ny tsipika feno an'ny Mac vaovao sy ny chip M1 azy ireo i Apple tamin'ny hetsika manokana tamin'ny volana novambra. Na izany aza, manome toky i Mark Gurman, ilay guru Bloomberg tsy hisy fisehoan-javatra Apple vaovao hatramin'ny 2022 ary tsy misy fanambarana momba ny vokatra vaovao amin'ny alàlan'ny fanambarana an-gazety.
Tsy hanana vokatra vaovao izahay raha tsy amin'ny 2022 hoy i Gurman
Ny vaovaon'i Apple amin'ity taona 2021 ity dia toa lasa nifarana. Taorian'ny keynote manokana an'ny septambra ho an'ny iPhones sy iPads ary ny Oktobra ho an'ny Macs dia toa izany Tsy hisy hetsika vaovao raha tsy amin'ny 2022. Izy io dia nahazo toky tamin'ny iray amin'ireo fanontana farany navoakan'ny iray amin'ireo mpamatsy vaovao Apple indrindra Mark Gurman an'ny Bloomberg.
Apple Event: Efa manana ny AirPods Generation faha-3 isika
Nilaza koa izy fa manodidina ny Mey na Jona dia ho hitantsika ilay puce M2 vaovao sy MacBook Air vaovao sy nohavaozina. Ity vokatra farany ity dia hahita ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe nanomboka ny taona 2010 miaraka amina fanovana endrika mitovy amin'ireo vokatra natolotr'i Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy: bezel fotsy fotsy manodidina ny efijery ary maro karazana loko misy, toy ny iMac misy ankehitriny.
Gurman koa dia manantena vokatra vaovao ho an'ny 2022, ao anatin'izany ny Mac mini, ny iPhone SE ary ny iPad Pro. Amin'ny hetsika mandritra ny taona hanakatonana tsingerina izay hanomboka amin'ny fanavaozana ny MacBook Air manodidina ny ampahefa-potoana voalohany amin'ny taona. Mila miandry fotsiny isika dia mahita fa tsy diso i Gurman. Mandritra izany fotoana izany, hankafizinay ireo vokatra vaovao natolotry ny Apple tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Nilaza i Mark Gurman fa tsy hisy hetsika Apple amin'ny volana Novambra
Apple dia miatrika olana lehibe any Shina